အစာငတ်ခံမှာလား ? တော်လှန်မှာလား ? | ဒီရေ
အစာငတ်ခံမှာလား ? တော်လှန်မှာလား ?
Labels: ဓါတ်ပုံ, တော်လှန်ရေး လက်စွဲ